बुढ्यौलीमा आमा–बाबुले के खोज्नुहुन्छ ? अर्थात जान्नुहोस् भोलि तपाईले के खोज्नुहुन्छ ? | Rochak
June 13, 2021 NepstokLeaveaComment on बुढ्यौलीमा आमा–बाबुले के खोज्नुहुन्छ ? अर्थात जान्नुहोस् भोलि तपाईले के खोज्नुहुन्छ ?
एउटा भनाइ छ, ‘स्वर्ग आमा बुबाको चरणमा छ ।’ यो सोह्र आना सही हो । बच्चाहरूको पहिलो गुरु आमा बुबा नै हुनुहुन्छ । बच्चाहरूको पहिलो शिक्षा परिवारबाट अर्थात् आमा बुबाआमाले दिनुहुन्छ । राम्रो संस्कार बच्चाहरुले आमा बाबुबाट पाउँछन् ।
यो सत्य हो कि आमा बुबाले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आफ्ना बच्चाहरूको नाममा बिताउनुहुन्छ । आमा बाबुले आफ्नो सपना पछाडि राखेर आफ्ना बच्चाहरूको सपना अगाडि राख्ने गर्नुहुन्छ । आफुले पुरानो लुगा लगाएर तपाईंलाई नयाँ लुगा दिनुहुन्छ ।
तपाईंको आमा बाबु आफैं विद्यालय जानु भएन होला, तर तपाईंलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन खोज्नुहुन्छ । आमा आफैले आधा भोकै बस्न सक्नुहुन्छ तर आफ्ना बच्चाहरूलाई पेटभरी खाना ख्वाउनुहुन्छ ।
अब प्रश्न तब खडा हुन्छ कि बुढ्यौली आउँदा आमाबाबु किन बच्चाहरूको लागि बोझ बन्न थाल्नुहुन्छ ? तपाईं किन आफ्नो बिरामी आमाबाबुलाई बोझ महसुस गर्नुहुन्छ ? आमा बाबु वृद्धवृद्धा भैसकेपछि कि बच्चाहरू सकेसम्म चाँडो छुटकारा पाउन चाहान्छन् ? आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
यस्तो देखिन्छ कि आज समय धेरै परिवर्तन भएको छ । सम्बन्धमा धेरै बाधाहरु छन् । एउटै शहरमा भए पनि जवान बच्चाहरू छुट्टिएर बस्न चाहान्छन् । बच्चाहरूलाई प्रायः उनीहरूका हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनेर थाहा पनि हुँदैन । तपाईंको बाबुआमासँग लडाँई हुन्छ भने पनि यो कुरा आफ्ना बच्चाहरूको दिमागमा नराख्नुहोस् ।
आज, छोरा र बुहारी आफ्नो परिवारमा व्यस्त हुन्छन् । तर बा आमा एउटै कोठामा बन्द हुनु परेको छ । तपाईं कतै बाहिर गए पनि, उहाँहरु घरमा एक्लै हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा, आमा बुबाले यस उमेरमा आफ्ना बच्चाहरूबाट केहि पनि चाहाना राख्नु भएको हुँदैन । तपाईंको बच्चासँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ ।
उमेर ढल्कदै गएपछि आफ्ना नाति नातिनाहरुसँग खेलेर भए पनि उहाँहरुको ओठमा दुई पल हाँसो ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर आजको भागदौड जीवनशैलीमा घरमा रहनु भएका बा आमालाई वेवास्ता गर्ने गरिन्छ । यसलाई मानवताविरूद्ध घटनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
उमेरको यो चरणमा तपाईंका बा आमाले कोसँग बोल्नुहुन्छ ? यदि उहाँहरुले तपाईंलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सुन्नुपर्छ । बुवा आमाको कुरा सुन्नुहोस् । बुवा आमासँग २ पलको समय बिताउनुहोस् । समय मिलाएर कुरा गर्नुहोस् । किनभने उहाँहरु तपाईंको जन्मदाताहरू हुनुहुन्छ ।
जीवनमा धेरै पटक, हामी केहि यस्तो गल्ती गर्छौं, जसले पछि धेरै पछुताउँनुपर्छ । ती मध्येको एक आमा–बुबाको आदर नगर्नु पनि हो । उमेर बढ्दै गएपछि अनादार गर्दा तपाईंको बा आमालाई अझ एक्लो भएको महसुस हुन्छ । उहाँहरुले भनेको सानो देखि सानो कामहरु पनि पुरा गर्न प्रयास गर्नुहोस् । जसले गर्दा उहाँहरुको मनमा छोरा बुहारीले आफुलाई बोझ मानिरहेका छैनन् भन्ने महसुस हुन्छ ।
आफ्नी श्रीमतीका कुरा सुनेर आफ्नै बाबु आमामाथि हात उठाउने छोराहरु पनि हाम्रो समाजमा देखिन्छन् । आफ्नो छोराछोरीलाई सासु ससुरासँग बन नदिने बुहारीहरु पनि हुन्छन् । यदी आज आमा बाबुसँग तपाईं गलत गर्नुहुन्छ । तर जब उहाँहरु तपाईंलाई सँधैका लागि छोडेर जानुहुन्छ तब तपाईं आमा बाबुको मानलाई बुझ्नुहुनेछ । त्यसकारण, आमा बाबुको सधैं कदर गर्नुहोस् ।
बच्चा जन्माउनकाे लागि उत्तम महिना कुन हो ?